Mampiasa ny Onjan’ny Fahitalavitra Ireo Mpahay Teknolojia ao Mombay Mba Hitondràna Fahafahana Miditra Bebe Kokoa Amin’ny Aterineto any India · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Jolay 2017 1:35 GMT
Ny kisarisary ara-teknika sy ny vokatry ny andrana napetraka tao Palghar. Dikasary avy tamin'ny lahatsary nakarin'i Gram Marg.
Nanao matoan-dahatsoratra ny tao India tato anatin'ireo taona vitsivitsy noho ny taha tsy nihanitombo tamin'ny fampiasàna ny Aterineto teny anivon'ireo mponina. Anefa, ny ankamaroan'ireo fitomboana ireo dia tamin'ny fidirana amin'ny Aterineton'ny finday sy ireo toerana ahafahan'ny sarababembahoaka miditra amin'izany.
Raha mampiasa ny Aterineto amin'ny findainy ny olona, any amin'ireo “cybercafé” sy ireo toerana ahazoan'ireo sarababembahoaka “wifi”, latsaky ny 2% -n'ireo tokantrano no manana fahazoana Aterineto raikitra. Ary na ny fidirana amin'ireo finday aza mbola ambany, 23% ho an'ny firenena manontolo. Tsy ampy finday avo lenta ireo mponina ambanivohitr'i India ary matetika tsy mifandanja sy miadana ny fahazoana Aterineto, noho ny tsy fahampian'ny fotodrafitrasa amin'ny Aterineto.
Aterineto / Haingam-pandeha ho an'ny rehetra, midika ve izany hoe ho an'ireo olona mipetraka any amin'ireo renivohitra sy tanàndehibe ihany ? Tsy misy fotodrafitrasa ho an'ny ambanivohitr'i India.
Mahatonga ireo maro an'isa amin'ireo Indiana hanana fitaovana voafetra mba hidirana lalindalina kokoa amin'ny teknolojian'ny Aterineto io. Raha toa ka mora tokoa ny miditra amin'ny loharanombaovao sy mandefa zavatra tsotra toy ny sary fotsiny amin'ny Aterineto, avy amin'ny finday avo lenta, tena mila fidirana amin'ny Aterineto raikitra kosa ny fanoratana kaody, fianarana na fanamboarana vohikala.
Mahita ny filàna ny fanaovana fampiasambola goavana ny governemanta mba hametrahana ny Aterineto haingam-pandeha any amin'ireo toerana ambanivohitra aminà distrika maherin'ny 600, amin'ny alalan'ny “fibre optique” lafo vidy sy teknolojia hafa, izay sady mety lafo no mandany fotoana.
Fa misy vahaolana hafa mandaitra kokoa manomboka mipoitra. Ny iray amin'ireo dia ny fitaovana izay mampiasa ny onjan'ny fahitalavitra mba hanolorana fahafahana miditra amin'ny Aterineto moramora kokoa ho an'ireo vondrom-piarahamonina any ambanivohitra. Tsy ela akory izay no azon'ilay andrana mora vidy natao tao Mombay ny vola mitentina 125.000 dolara Amerikana (Roupie Indiana 8.2 tapitrisa) avy amin'ny Equal Rating Innovation Challenge nataon'ny Mozilla, ilay fikambanana tsy mitady tombony ao ambadik'ilay fitety manana loharano misokatra, Firefox.
Ny profesora Abhay Karandikar ao amin'ny Ivontoerana Indiana ho an'ny Teknolojia, Bombay (IIT-B) sy ny ekipany misy amin'ireo mpianatra Masitera sy Doktoràn'ny Ivontoerana no mitarika ny Vahaolana Gram Marg ho an'ny Aterineto Haingam-pandeha any Ambanivohitra. Mitantana ny Vondrona Fikarohana Bomaby IIT i Karandikar ary mandray anjara mavitrika amin'ny fakànkevitra momba ny politikan'ny Aterineto sy ny Hafainganam-pandehany any India.
Mety hamaha ny olana amin'io raharaha io ny ‘Vahaolana Gram Marg’. Ny tombotsoan'io vahaolana “kilometatra antonontonony sy farany” io dia izy tsy mandany vola be, zara raha mihinana angovo, ary afaka apetraka haingana, mampiasa ny fotodrafitrasa fandefasana fahitalavitra efa misy fotsiny mba hahazoana ireo tokatrano lavitra any ambanivohitra. Kendren'ilay tetikasa ny hitondra ireo tanàna miisa 640.000 any ambanivohitr'i India ho tafiditra ao amin'ny tambajotra. Efa natao tamin'ireo tanàna kely miisa 25 izay natao andrana io tao anatin'ny roa taona lasa.
Ao anatin'ny indostrian'ny fifandraisandavitra sy ny Aterineto, ny teny hoe “kilometatra farany” dia entina hilazàna teknolojia izay mitondra ‘signal’ avy amin'ny tambajotran'ny fifandraisandavitra amin'ny toerana somary akaiky (aka ny “kilometatra farany”) hankany sy avy any amin'ny toerana tokony alehany farany, matetika trano na orinasa. Ny vahaolana kilometatra farany misy ankehitriny mba hitondràna Aterineto any amin'ireo tokantrano Indiana any ambanivohitra dia saika ireo telefaona mampiasa tariby sy ADSL, ireo hosona ‘coaxial’ sy ireo teknolojia tsy misy tariby, izay mampiasa indrindra indrindra ny onjan‘ny finday (Fanamarihana: antsoina koa hoe ilotro ny spectre amin'ny resaka fizika).
Mampiasa ny teknolojia 4G ireo Indiana mpamatsy tolotra finday mba ahazoana Aterineto haingam-pandeha kokoa, fa mbola lafo loatra ihany izy ireny ho an'ireo mponina ambanivohitra, izay ambany ihany koa ny tahan'ny fananana finday avo lenta ahafahana mahazo aterineto haingam-pandeha.
Mamaha ny olan‘ny fampifandraisana an'ireo mponina tsy nahazo na zara raha nahazo Aterineto ny Gram Marg, amin'ny maha-vahaolan'ny “kilaometatra antonony” sy “kilometatra farany” azy. Mampiasa ny hevitra fampiasàna ny “faritra fotsy/banga” amin'ny fahitalavitra izy io mba hahafahan'ny angondrakitra mivezivezy ao amin'ny wifi-n'ny tanàna, ary ny fototra fizaràna izay mifandray amin'ny “fibre optique” haingam-pandeha. Ny faritra fotsy dia entina milaza ireo hatetika (fréquences) izay tsy misy mampiasa amin'ny ilotro tsy mila hosy (fil, câble), toy ny tambajotran'ny fahitalavitra. Notazonina ho banga ireo hatetika ireo eny anelanelan'ireo fantsona, mba hanenana ny fifanindriana. Na dia fampiasa indrindra ho an'ny fahitalavitra aza ireo, mitovitovy amin'ireo hatetika ampiasaina amin'ny teknolojia 4G ireo, ary afaka ampiasaina tsara mba hanome fahazoana malalaka ny Aterineto haingam-pandeha.
Namoaka tatitra mikasika ny fahafahana mampiasa ny faritraa fotsy ao amin'ny UHF mba hitondràna Aterineto haingam-pandeha ny Fikambanan'ny GSM, fivondronan'ireo mpivarotra izay maneho ireo tombontsoan'ireo mpandraharahan'ny finday maneran-tany.
Dikasary avy tamin'ny tatitra nataon'ny PLUM ho an'ny GSMA momba izay mety ho tombontsoa avy amin'ny ilotro 700 MHz any ambanivohitra ao India
Nikhil Pawa, mpandraharaha, mpanao gazety, mpamoaka vaovao ary mpanorina sy tompon'ny MediaNama, no tao amin'ireo mpitsara ny Equal Rating Innovation Challenge (Fanambin'ny Famoronana Ho An'ny Fitoviana). Tao amin'ny Facebook, nanazava ny zavatra tiany mikasika ilay tetikasa izy:
1. Ny teknolojian'ny loharano misokatra hamatsiana Aterineto haingam-pandeha amin'ny fampiasàna ny ilotron'ny faritra fotsy
2. Dia mora kokoa noho ireo “chipsets” efa misy ho an'ny haingam-pandeha ao amin'ny faritra fotsy
3. Tsy mila fifandraisana toratady ho an'ny haingam-pandeha, izay tena olana tokoa (ary fototry ny fahalafosana) indrindra ho an'ireo faritra feno havoana mitandavana.
Manantena tokoa aho hoe tsy manana lisansa amin'ny ilotron'ny faritra fotsy ho an'ny hafainganam-pandeha i India.
Ireo zavatra hafa tiako ihany koa dia ireo finiavana nataon'ny vondrom-piarahamonina hitady vahaolana ho an'ny hafainganam-pandeha, izay lasa an'ireo tanàna kely sy tanàna mihitsy ny fotodrafitrasan'ny Aterinetony.
Ny iray amin'ireo sakana mety hatrehan'io vahaolana io ny fanambin'ny fanaovana ny ilotron'ny faritra fotsy ho azo ampiasaina. Ny iray hafa indray dia eo an-dalam-panesorana tsikelikely ny fahitalavitra analojika nentim-paharazana i India ary manova izany ho teknolojian'ny fanapariahana nomerika sy DTH.
Andro Fanandramana ny “Equal Rating Innovation Challenge” – Vahaolana “Gram Marg” ho an'ny fanapariahana haingam-pandeha any ambanivohitra
Asa mahaliana ataon'ny @iitbombay
Naneho hevitra ny mpampiasa Facebook, Anand Rai, fa:
Ho finiavana lehibe “Manao zavatra any India” io mba hanosehana ny India Nomerika manerana ny ambanivohitr'i India zara raha mahazo / tsy mahazo mihitsy ny Aterineto.
Milaza ny profesora Karandikar fa miasa amin'ny lasitranà fandraharahàna maharitra izy ireo, izay afaka manome fahafahana ireo mpandraharaha any amin'ny tanàna kely hanaparitaka sy handrindra ny fidirana amin'ireo tambajotra. Ho hita eo ihany hoe hatraiza ny fahafahan'ilay tetikasa hanena ny fivakisana nomerika ao India, fa tena nampitombo fanantenana lehibe aloha io teny anivon'ireo mpandray anjara sy ireo manampahaizana momba ny fifandraisandavitra ao amin'ny firenena.